Kabtan Sergio Ramos oo markale ka dhaawacmay Real Madrid… (Miyuu seegi doonaa kulanka Sevilla?) – Gool FM
Haaruun May 8, 2021
(Madrid) 08 Maajo 2021. Kabtan Sergio Ramos ayaa markale ka dhaawacmay Real Madrid, kaddib markii dhaawac uu la maqnaa uu ka soo laabtay kulankii dhowaan ay wajaheen Chelsea.
Haatan waxaa la warinayaa in Ramos uu dhaawac kale soo gaaray, isla markaana uusan awoodi doono inuu wajaho kooxdiisii hore ee Seville habeenka Axadda.
Kabtanka ayaa seegay tababarkii kooxda Real Madrid ee maanta oo Sabti ahayd ay qaadanaysay, iyadoo Los Blancos ay sii deysay warbixin caafimaad oo gaaban oo ku saabsan dhibaatadii ugu dambeysay daafacan.
“Kaddib baaritaannadii ay ku sameeyeen Sergio Ramos waxaada caafimaadka ee Real Madrid, waxaa laga helay caabuqa ‘tendenitis’ ee muruqa saameeya, waxaana uu ka haleelay muruqa bidix” ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay Real Madrid, kaasoo aan lagu sheegin muddada uu garoomada ka maqnaan doono ciyaaryahanka.
Ma cadda haddii Ramos uu awoodi doono inuu markale u ciyaaro Real Madrid xilli ciyaareedkan, iyadoo kaliya afar kulan ay kaga harsan tahay kooxda kulammada horyaalka La Liga.
Manchester United oo gacmaha ka laabanaysa Jadon Sancho... (Waa kee ciyaaryahanka ay dareenkeeda u weecisay?)
Shaxda rasmiga ah kulanka adag ee Kooxaha Barcelona iyo Atletico Madrid ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey